सबैको टि.भी Archives - सबैको समाचार
काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिका ११ मा काँग्रेसलाई वडा अध्यक्षका उम्मेरदवार छान्न सकस भएको छ । आकाँक्षी धेरै हुँदा उम्मेरदवार छान्न सकस भएको हो । त्यहाँको वडा अध्यक्षका लागी काँग्रेसका ६ जनाले दाबी गरेका छन् । ती मध्ये धुलिखेल ११ का काँग्रेस उपसभापति दिपेन्द्र धितालको पनी दाबी छ । उनले आफूलाई पार्टीले टिकट दिए जितेर देखाउने […]
काभ्रेको बनेपा नरपालिका वडा नं ८ को वडा अध्यक्षका लागि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट एक महिला सर्वसम्मत सिफारिस भएकी छन् । आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि शुभलक्ष्मी मानन्धरलाई काँग्रेसले वडा अध्यक्षका लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो । उनले महिलाले पनि नेतृत्व लिन सक्छन् भन्ने हेतुले आफूले दाबेदार दिएको सबैको समाचारलाई जानकारी दिएकी छन् । २०४७ सालदेखि […]
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाको मेयरमा दिनेश हुमागाईँले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आँउदो बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट हुमागाईँले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । लामो समयदेखी राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका हुमागाईँले वडा बासीको दुःख सुखमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गर्न चाहेको बताएका छन् । सधै सत्यको पक्षमा तथ्यको पक्षमा […]
काभ्रे : काभ्रेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्ने रकम इन्टरनेट प्रदायक तथा अन्य केबुलहरुले २०७४ साल पछि नबुझाएको पाइएको छ । २०७४ साल सम्म रकम बुझाएका संस्थाहरु ०७४ पछि भने चुपचाप बसेका छन् । विजुलीको पोलमा तार, केबुल, प्रयोग गरे एउटा संस्थाले वार्षिक ४५ हजार १ सयका दरले तिर्नु पर्ने प्राधिकरणको नियम रहेको छ । […]
काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ की प्रीति रानी तामाङको शव ६ दिन बितिसक्दा पनि दाहसंस्कार नभएपछि माईती पक्ष आन्दोलित भएको छ । शवलाई धुलिखेल अस्पतालमा राखिएको छ । मृत्यु भएको ६ दिनसम्म पनि शव दाहसंस्कार नगर्नुको कारण खोज्दै मृ तकका माईती पक्षले मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको प्रांगनमा प्रदर्शन गरे । माईती पक्षले शव […]
काभ्रे : वकपत्रका क्रममा काभ्रे जिल्ला अदालत परिसरबाटै फरार भएका काभ्रेको खानिखोला गाउँपालिका ६ का सुनिल वाइबा लामा फेरी पक्राउ परेका छन् । चोरी तथा डाका मुद्धाको अभियोग लागेका उनलाई भदौ ९ गते वकपत्रका लागि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा उनी भागेका थिए। उनलाई भक्तपुरको ठिमीबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको […]
काभ्रे : काभ्रेको भुम्लु गाउँपालीका वडा नं. १ र ६ मा भैसीको सेतो पाडा पाडी देखा पर्न थालेको छ । भम्लुको वडा नं. १ सापीङको चैनपुरमा गत भदै १० गते टेक बहादुर तामाङको घरमा भैसीले सेतो पाडो जन्माएको छ । सदैब भैसीले कालो पाडो जन्माउने भए ता पनी भुम्लु गाउँपालीका वडा नं. ६ मा ३ […]
पुजन धिताल काभ्रेको बनेपा नगरपालीका वडा नं. ५ बस्ने २८ वर्षीय युवाले आफ्नो मिर्गौला गुमाएका छन् । आफ्रनो दाइको मिर्गौला बेच्ने तस्करहरूबारे सूचना खोज्ने क्रममा उनीहरूकै जालोमा परेर उनीले आफ्रनो मृगौला समेत गुमाएका छन् । २०४९ साल देखि काभ्रेको विभिन्न स्थानमा फैलदै आएको मृगौला व्यापारीहरुको संञ्जाल अझै पनी यथावत नै रहेको छ । विगत केहि […]
काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ का तुलसी कुँवरले आफुलाई गाउँपालीका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले कार्यकक्षमै हातपात गरेको बताए । कुँवरले आफ्नो खेतमा खनेको बाटोको विषयमा दिएको निवेदनका लागी गाउँपालीकाले नै खबर गरे पछि गाउँपालिकाका पुगेका कुँवर माथी हातपात भएको हो । न्ययिक समितिले छलफलको लागी बोलाए पछि गाउँपालिकाका पुग्दा गाउँपालीका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवारले आफु माथी […]
काठमाडौं : पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका गायक विवेक चौलागाई र गायीका रचना रीमालको स्वरमा रहेको गीत ‘बैना’ सार्वजनिक भएको छ ।गतिको शब्द/संगीत प्रभावन जे, मिक्सीङ/मास्टरिङ गोविन्द सोनी, र स्टुडियो एक्सन स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको हो । सत्यकला लामा, बुद्धि तामाङ र पुरु सिग्देलको अभिनया रहको गीतको भिडियो निर्देशन कमल राई, क्यामेरा हरिश महरा, सम्पादन/कलर विष्णु खड्का […]
यस्तो छ काभ्रेको तालढुंगा (भिडियो सहित)
काभ्रे :काभ्रेको तालढुंगा धेरैले सुनेको नाम हो । तर धेरै जना पुग्न नसकेको ठाउँ पनि । यो तत्कालिन माओवादीको आधारभूमि पनि हो । केहिवर्षअघि सम्म निकै मुस्किल थियो । तर अहिले भने सडक यातायातको सहज पहुँच पुगेको छ । पनौती, कामीडाँडा सडक हुँदै तालढुंगासम्म पुग्नलाई सजिलो भएको छ । खाना र बस्ने सुविधा पनि राम्रो […]
धुलिखेल : धुलिखेल नगरपालिकाले राष्ट्रिय बिभुति वीर बलभद्र कुँवरको शालिक निर्माण गरेको छ । देवीस्थान स्थित वडा नम्बर ९ मा निर्माण गरिएको कुँवरको शालिकको आज नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार ब्याञ्जुले उद्घाटन गर्नुभएको हो । शालिक निर्माणका लागि १९ लाख खर्च भएको छ । शालिकको उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख ब्याञ्जुले राष्ट्रिय बिभूतिको सम्मानका लागि शालिक निर्माण गरेको […]